Kuwana yako Email kuInbox | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 17, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
GetResponse yakaburitsa yakapusa infographic kupa vashambadziri nzwisiso yemavandudziro ekuendesa kwavo email pamwe ne whitepaper pamusoro wenyaya zvakare.
Kubva kuGetResponse: Wanga uchiziva here kuti maererano neongororo ichangoburwa neKushambadziraSherpa, imwe chete mumatanhatu emaema haisvike kwayiri kuenda - kureva inbox yemubhadhari? Izvo izvo hazviite kunge zvakavharwa ne spam firita, zvichiita kunyangwe yepasi rose yakanaka kwazvo email template isingabatsiri. Nhau dzakanaka ndedzekuti, izvi zvinogona kuchinjwa. Uye neruzivo rwedu mukupa + 99% kununurwa, tinoziva maitiro ekuchichinja. Ehezve, tinoda kuti iwe uzive, zvakare. Saka isu takauya ne "pfupi pfupi" yematanho akakosha uye takatofunga kuita kuti iwedzere "mushandisi-inoshamwaridzika". Iyo infographic yaitaridzika kunge yakakwana.
Isu nguva pfupi yadarika takasangana nekambani yaive ichitumira ese maemail avo kunze kwavo maitiro uye vasina kunzwisisa zvimwe zvakanaka zvekushandisa email service provider. Heano mashoma.
Email sevhisi vanopa vane bounce manejimendi maitiro. Nguva zhinji, vashandisi vane ma inbox akazara kana yavo email iri pasi pasi. ESPs ichaedzazve maemail kana aripo soft inobhururuka uye inodzivirira kambani yako nekusainyorera maemail kero ne zvakaoma bounces (kureva. email kero haipo).
Email vanopa rubatsiro vanotaura. Kunyangwe kuvharirwa kwemifananidzo kuchidzivirira kugona kuona kana ivo vasingagashiri vavhura email yako, kuvhura uye kuyera tinya-kuburikidza nemitengo pazvikwata zvinobatsira kambani yako kuvandudza zvirimo kana dhizaini nekupa ruzivo rwakakura rwekuzivisa.
Email vanopa sevhisi vanosangana nemitemo inodzora yekutumira email uye kuvanzika kwedata. Kutyora chiito cheUS CAN-SPAM kana yeEuropean EU rairo 2002/58 / EC (kunyanya Chinyorwa 13) zvinogona kutungamira kune vakasarudzika IP kero, kana zvakanyanya, kutyorwa chaiko faindi. Kushandisa ESP ine mbiri ichave nechokwadi chekuti hausi kutyora chero mitemo.